Fetin’ny paska sy ny pentekoty : Nouveau arrivage ao amin' ny Baolai · déliremadagascar
Ao anatin’ ny fankalazana ny fetin’ ny paska sy ny pentekoty ho avy izao dia maro ireo magazay lehibe eto amintsika no manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa. Anisan’ izany ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely sy Soarano ary ao Bazar be Toamasina. Izay ahitana entana, mifanaraka tsara amin ‘ny filàna sy ny fahefa-mividin’ny tsirairay.
« Maro isan – karazany ny entana vaovao lohalaharana amin ‘ ny kalitao ato aminay, toy ny : laser tv 100 » – Smart tv sy télé led, misy manomboka 22 hatramin ‘ ny 85 pouces : misy antoka 1 taona daholo , ustensiles de cuisine, synthétiseur, lecteur divx/dvd, réfrigérateur, subwoofer, fer à lisser ( volo ), panneaux solaires mono sy polychristalline… » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny antsipirian’ izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 033 37 968 88 (amin’ ny ora fiasana).
Ny fety toy izao, dia fihaonam be ampifaliana hoan’ ny fianakaviana malagasy. Rariny loatra raha miaraka amin’ ny entana tsara kalitao no hiantrehana izany.
Tonga ny entana vaovao marobe